Amazwe abanda kakhulu emhlabeni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
USergio Gallego | | Isimo sezulu, Amagagasi abandayo
Ngalezi zinsuku, iSpain ihlupheke igagasi lokuqala elikhulu lokubandayo lonyaka ngamazinga okushisa aphansi kakhulu, ikakhulukazi enyakatho yenhlonhlo. Kodwa-ke, la mazinga okushisa awahlangene nalawo afinyelelwe kwamanye amazwe phakathi nezinyanga zasebusika.
Ngokulandelayo ngizokukhombisa ukuthi iziphi angamazwe abanda kakhulu emhlabeni futhi lapho ungafuni ukuchitha ubusika khona.
Ngenye yezindawo kubanda Emhlabeni futhi kufinyelele e-Antarctica Ama-degree angama-89 ngaphansi kuka-zero. Ubuhle bezindawo ezibukeka bubenza abahambi abaningi eza unyaka wonke futhi ahlupheke amazinga okushisa aphansi kakhulu.
ENyakatho Canada Ingenye yezindawo ezibanda kakhulu emhlabeni wonke ngoba ingafinyelelwa Ama-degree angama-40 ngaphansi kuka-zero. Isimo sendawo sale ndawo kuyamangalisa ngempela njengoba sekukhona izinkulungwane zezihlahla zemisayipuresi ezineqhwa kanye nezintaba ezinkulu ezenza okufanayo ikhadi langempela likaKhisimusi.
IFinland yinto yangempela I-Europe Yenyakatho neqhwa likhona ngesikhathi bonke ubusika obude. Amazinga okushisa angathola kuma-degree angama-45 ngaphansi kuka-zero kwezinye izindawo zezwe kanye namahora okukhanya kwelanga ngosuku cishe awekho. Enye yezindawo ezivakashelwa kakhulu nezinconyelwe noma iziphi izivakashi Kuyabanda futhi kubanda iLapland idolobha lapho kuhlala khona uSanta Claus.
I-Iceland ingelinye izwe eYurophu lapho ubusika bunzima kakhulu. Amazinga okushisa ajwayelekile nxazonke Ama-degree angama-25 ngaphansi kuka-zero bonke ubusika, ngakho-ke impilo kuleli kunzima ngempela. Njengendlela yokuphikisana nokubanda okukhulu, i-Iceland inayo namathafa amahle impela lokho kufanele ukuvakashelwa nokucabangisisa okungenani Kanye empilweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi abandayo » Amazwe abanda kakhulu emhlabeni